#gasy | GAZETY_ADALADALA
« Adala » miresaka !
Posted on 28/11/2014 by gazetyavylavitra
28 Nov 2014 – RAMBELO (ilay olondia) MIKÔZY: (ho tohin’ilay « con » angamba?)
Betsaka ny oham-pitenenana teo amintsika Gasy raha momba sy/na resaka adala (resak’adala) no atao. Izany no porofo fa ny tany dia tsy nilaozan’adala, kanefa tsapa koa fa tsy azo nahilika sy navela tamin’izao ireny adala ireny fa notafian-damba, narahina am-bokony amin’ny sitra-pony na dia zary ho enta-mavesatry ny fiaraha-monina aza izany.
Raha sendra izay adala matanjaka dia mihafy amin’ny daroka ataony, ny doro-trano sy ny fanimban-javatra mahazatra azy, ny teny ratsy sy ompa mivoaka ny vavany. Dia hiafiana satria adala! Ka hovonoina kosa àry ve? Tsy maintsy hanananan-tsiny amin’Andriamanitra Andriananahary raha miadaladala hanao an’izany. Fa ianao ve efa nanana, na manana havana adala sy ondrakondrafana? Neson’ny mpiara-belona ve ianao? Mahatsiaro menatra? Dia inona no vaha-olana mba nataonao?
Ny adala ihany no avelanao hiteny ny hevitra tianao ho resahana? Ny adala no avelanao hanapaka amin’ny hevitra hifehezana anao? Ny adala no ataonao ho tompon’ny fanapahan-kevitra? Feheziny sy tsy avelany hihary harena na hikaroka ny tombony ho anao ianao fa ny azy ireo ihany no mahalala ny fetra tokony hataonao. Malahelo ny havantsika ianao, nihevitra fa lalin-tsaina tokoa izy ireo tamin’ireny fotoana nanombohan’ny fihetsehan’ny “hadalany”. Sao diso hevitra (sanatria) e!
Fanamarihana: nadika tsy nasiam-panovana araka izay nanoratan’ny tompony azy ny lahatsoratra. ISaorana hatrany izy sy ny asa sorany
Filed under: anao ny fitenenana, asasoratra, aterineto, fiaraha-monina, harena ankibon-ny tany, kanto malagasy, kolontsaina, mpanoratra, tapatapany, teny malagasy | Tagged: #adala, #andriamanitra, #andriananahary, #gasy, #harena, #ompa, #ondrankondrafana, #ony_rambelo, #tsiny |	Leave a comment »